"Koa dia iraka solon’i Kristy izahay, toa an’Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon’i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe: mihavàna amin’Andriamanitra anie ianareo."2 Korintiana 5:20
Tao amin’ny sambo lehibe Titanic, rendrika tany amin’ny ranomasimbe Atlantika tamin’ny avrily 1912, dia nisy tovolahy kristiana, antsoina hoe John Harper, niomana handeha ho misionera. Rehefa nanomboka nilentika ny sambo, dia nanampy ny mpandeha hiditra ao anatin’ireo lakan’aina izy, fa izy kosa tsy nanaiky hankao: «Ny zaza amam-behivavy aloha, hoy izy, ary avy eo ny tsy mino». Tamin’ny farany aza, dia nomeny olona ny fehikibo avotr’aina teny aminy. Dia nilentika ny Titanic.
Nitantara ity mpandeha Ekôsey iray anisan’ireo avotra: «Nitsingevana teny ambony hazo fisaka iray aho, no indro nisy onja mahery nitondra teo akaikiko an’i John Harper, izay nifikitra tamin-javatra nitsingevana ihany koa. Hoy izy niantso ahy: Mpino ve ianao? - Tsia, hoy aho. - Dia nanohy tamin’ny feo mahery izy hoe: Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao! Nentin’ny onja lavidavitra izy, dia naveriny teo akaikiko indray. Mbola napetrany ihany ilay fanontaniana teo, ary nitovy ny navaliko: Indrisy, tsy afaka miteny aminao aho hoe voavonjy. Dia mbola hoy indray izy: Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao!
Izay no teniny farany. Tampoka teo izy dia nilentika tany anaty rano mamanala. Ary teny ambony ranomasimbe aho, nandritra ireo fotoan-tsarotra nanaraka izany, no nitodika tamin’ny Mpamonjy ka nametraka ny fiainako teo am-pelatanany. Araka izany, dia izaho no olona farany nentin’i John Harper ho an’Andriamanitra.»